Afar-in-mid feeraha ka mid ah sarrifka ee AC wada dhafan qaybaha AMJ2-4003H / 1003HX4 - Shiinaha Shanghai IPKIS
Guide User ee
Afar-in-mid feeraha ka mid ah sarrifka ka mid ah qaybaha isku dhafan wada AC AMJ2-4003H / 1003HX4
AMJ1 busbar dhafan qayb Guudmarka waa qayb qaybsan xira loogu talagalay by IPKIS saddex waji multi-laan laan isdhexgalka hadda. Dhismaha dheggan oo qurux badan, oo la xidhiidha ku haboon oo ammaan ah. Iyada oo design qaybsan, qalliinka adag line qaybinaysa waxaa fududeeyey in si fudud la adkeeyo la kaashawiito ah. Isla mar ahaantaana, module la spliced ​​kartaa sida ay laanta baahida dhabta ah, taas oo si weyn u badbaadiyay qiimaha shaqaalaha iyo kharashka meel, iyo connec ku ...
AMJ1 busbar dhafan qayb qayb ka yahay qaybsan xira loogu talagalay by IPKIS saddex waji multi-laan laan isdhexgalka hadda. Dhismaha dheggan oo qurux badan, oo la xidhiidha ku haboon oo ammaan ah. Iyada oo design qaybsan, qalliinka adag line qaybinaysa waxaa fududeeyey in si fudud la adkeeyo la kaashawiito ah. Isla mar ahaantaana, module la spliced ​​kartaa sida ay laanta baahida dhabta ah, taas oo si weyn u badbaadiyay qiimaha kharashka iyo meel shaqada, iyo xidhiidhka ka waa mid aad u qurux badan.
xidhiidhada jilicsan Isticmaal ulaha gudban ka copper jilicsan in ay ku xidhmaan shido iyo busbars
xiriir adag la sameeyey iyadoo la isticmaalayo ulo gudban copper iyo busbars
cabbir gaar ah sida ay baahida dhabta ah si loo ogaado sooc, fadlan na siiso isticmaalka su'aalo weydiinta.
Dhafan busbar baska AMJ2integrated
biiro Main 400A saddex waji kiiska doorsoon ku biiro
Sub-biiray 100A saddex waji kiiska doorsoon ku biiro
xiriir Main xiriir jilicsan
Sub-xiriir la xidhiidha jilicsan
● The dhabta asalka copper dhashay galay biiro qaybsan si toos ah rakibay.
● waxyaabaha la diyaarin karaa siyaabo kala duwan: feeraha, dhaqaaqo soo socda ee, out on xiga.
● Our module noqon kartaa oo dhan dhabta xigta jilicsan, ku biiro si toos ah kor ku xusan qaybtan, kala dheereynta hagaajin, aad bay u yareeyo inay helaan meel jiifku ka.
Qaab dhismeedka haysa ● isku xigta ugu muhiimsan iyo-xigta sub si gaar ah loogu talagalay, ku haboon caddaymaha kala duwan oo ah naxaas ah sidoo kale u dhabta, heshiis ku biiro kala duwan, si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha.
● qolof ilaaliya wax PA66.
● isku xigta ugu weyn ee copper oo tayo sare leh.
● bas-gaaban u adkeysan hadda (Qoraalka ICW): 18KA kor ku xusan;
● la xidhiidha soo socda: saddex waji / afar-waji 250A ~ 800A, oo isku xigta oo jilicsan ama adag,
● busbar: conductivity sare dahaadhay nickel copper,
● qolof ilaaliya: PA66;
● dhumucdiisuna busbar: qiimeeyo 4-10mm;
● xiriir laanta: in ka badan laba-waji saddex waji / ka badan 63A, oo isku xigta oo jilicsan ama adag.
Shanghai IPKIS Power Technology Co., Ltd. focus on nidaamka sanduuqa combiner isku dhafan iyo goobaha amarro, koronto qaybinta awoodda nooc dhamaystiran oo cilmi technology xiriir korontada iyo horumarinta iyo codsiga ee sanadka maalgashiga cilmi by sano, codsiga patent ansixiyey formation of a dhawrsoonaanta goobada, isbadal cilmi sayniska waa inoo aheyd, Shanghai Tech ganacsi; Shirkadda waa wanaagsan at faa'iidooyinka xirfad iyo farsamo shirkadda nidaamka si ay u bixiyaan xal la xiriira korontada, waxaannu la tegaynaa xirfadeed, iskaashiga waqtiga iyo degdeg ah, si ay u abuuraan qiime dheeraad ah oo loogu talagalay macaamiisha, iyo macaamiisha u sameeyaan dhow a taageeraya xiriirka, iyada oo dhowr sano ayaa waxaa la aasaasay a model ganacsi u gaar ah iyo la aasaasay goobaabin ah deegaanka dabiiciga ah ee line horumarinta caafimaad ee shirkadaha. Under asalka hadda overcapacity, casriyeyn tiknoolaji iyo isdhexgalka warshadaha, waxaa lagama maarmaan ah in ay si firfircoon uga sahamin fikrado cusub u leedahay badbaadada iyo horumarinta shirkadaha yaryar.
tayada Product waa kaar ganacsi, tayada aan ka gaaloobay oosa. Waxaan ka welwelsan tahay faahfaahinta, horumar joogto ah, taas shahaadada mid, waa wakiilka ah shaqaalaha oo dhan IPKISer ee.
Previous: Back-dhajinta afar-in-mid qaybood ah looxaanta AC wada dhafan AMJ1-2503S / 0633SX4
Next: Caatada ah lix galay wada AC looxaanta dhafan qaybaha AMJ2-4003H / 1003HX6
180a Box Qaybinta korontada
DC Box Qaybinta korontada
Tayada Sare Solar Combiner Box
caaga Solar DC kulankooda Box
Array PV Combiner Box
Array PV String Combiner Box
PV Guddiyada Solar Box Combiner
Solar Ip65 Combiner Khaanadaha
Solar Module kulankooda Box
Guddiyada Solar DC Combiner Box
Back-dhajinta laba-in-mid ah looxaanta converg AC ...
Back-dhajinta hoos wadada shan galay photovo a ...
Deldesheen oo hoos wadada saddex galay conver PV AC ...
Back-Hung saddex-in-mid AC looxaanta isugu ...
Hilibka doofaarka sideed galay AC wada looxaanta ah i ...
Cinwaanka: Shanghai IPKIS Power Technology Co., Ltd